Trenbolone Acetate (Tren ace) powder (10161-34-9) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Anabolics Steroids / Trenbolone powder Series / Trenbolone Acetate (Tren ace) powder
3.00 kupererwa ne 5 maererano ne 3 kasitoma ratings
MUTSVENE unobatanidzwa uye unogadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika pakukura kweTrenbolone Acetate (Tren ace) powder (10161-34-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Trenbolone Acetate (Tren ace) powder video
Raw Trenbolone Acetate (Tren ace) powder Basic Characters
Raw Trenbolone Acetate (Tren ace) kushandiswa kwepoda mu steroid cycle
Trenbolone Acetate powder zvinowanzozivikanwa neTren A, Tren ace powder (CAS 10161-34-9), Revalor, Finaplix, Finajet, nevanoumba muviri kana vaGL.
Trenbolone Acetate powder inowanzoshandiswa pamayero e35-150 mg / zuva, uye zvinowanzoitwa 50-100 mg / zuva.
Trenbolone Acetate powder (CAS 10161-34-9) inowanzoshandiswa pamayero e35-150 mg / zuva, uye zvinowanzoitwa 50-100 mg / zuva. Iko 35 mg chimiro chinowanikwa zvakakodzera chete kana uine hukama hwepamusoro hwehutbolone-mamwe madhara. Kana chitbolone inoshandiswa iyi iri pasi uye inobudirira inenge ichidiwa, imwe injectable anabolic steroid inofanira kuwedzerwa. Masteron isarudzo yakanaka nokuda kwechinangwa ichi. Chimwe, chisarudzo chakasiyana-siyana ndi testosterone.
Warning on Raw Tren ace powder
Chirevo chakakomba chinokonzerwa neEquipoise ndechehafu yehupenyu, iyo inogona kunge yakasviba mazuva 12. Izvi zvinokonzera nguva yakareba kwenguva mushure mekupihwa kwekupedzisira panguva iyo mazinga akasawana akakwana zvakakwana kuti agone kubatana nevanabolism, kana kuderera zvakakwana kubvumira kupora kuitika. Chigadzirisa chinetso ichi ndechokushandisa Equipoise mune imwe chikamu chekutanga chepakati.
Kusiyana neizvi, trenbolone inanthate yezana yehutachiona steroid inoda kusvika 20% pasi. Nokuda kwechikonzero ichi, vhiki rega rega dosing ye trenbolone enanthate ishoma kudarika pane yeacetate. Nokuda kweananthate, vhiki yevhiki yepa dosing inowanzoitwa 300-800 mg.
Kusiyana neTrenbolone Acetate powder iyo ine hafu yehupenyu yenguva ye1 zuva saka saka inofanira kuiswa muzuva nezuva, trenbolone enanthate inowanzojowa 2-4 nguva pavhiki. Hupenyu hupenyu hunenge huri pamusoro pezuva re5.
Kana usina chokwadi nezvehutano hwemunhu pachako kune chitbolone, iyo acetate ester inoshandiswa sezvo inonatsa hurongwa hwechimbichimbi. Iyo inofadzawo zvikuru pakushandisa kwenguva pfupi kana kuti kwemavhiki ekupedzisira emiganhu yakareba nokuti kusununguka kwakakurumidza kunopa shanduko nokukurumidza kubva kuva nehupamhi hunofananidzirwa kuti huve nemigumisiro yakakwana kusvika kumazinga akaderera achibvumira kupora.
Kunyange zvazvo trenbolone inoshandiswa haina kudiwa kuti ibudirire migumisiro yakaisvonaka mune anabolic steroid cycle, inogona kuva rubatsiro runoshamisa pamigumisiro yakadaro.
III. mahwanda Trenbolone Acetate (Tren ace) poda HNMR
Nzira yekutenga Trenbolone Acetate powder (CAS 10161-34-9); kutenga Tren ace powder kubva kuAASraw
AASRaw inopa kuchena 99% trenbolone acetate yakasvibirira yakasvibirira kuti vashandi vemuviri kana pasi pasi pasi vashandisi vashandise pakushanda kuti vawane zvakawanda, kuwana simba.
Ndekupi kwatenga Trenbolone Acetate powder?
Nzira yekubatanidza mbhitatoni yakasvibeta acetate?
Hapana munhu achakuudza 10 chokwadi pamusoro peTrenbolone Acetate